Shivaraj Online | वाणगंगा मा २३ तोला सुन चोरी ! - Shivaraj Online वाणगंगा मा २३ तोला सुन चोरी ! - Shivaraj Online
वाणगंगा मा २३ तोला सुन चोरी !
दीपा महत, चारनम्बर ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा चोरी भएको छ । नगरको वडा नम्बर ४ दरखास्त टोलका झण्डै आधा दर्जन घरमा मंगलबार राती चोरी भएको हो । घरमा कोही नभएको मौकापारी एकैदिन आधा दर्जन घरमा चोरी भएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार दरखास्तका खगराज ढुङ्गाना, सिर्जना पाण्डे (पण्डित), गोपाल अधिकारीको घरमा चोरी भएको हो । अरु घरका मानिस यहाँ नभएकोले के के चोरी भयो अनुसन्धान भैरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरिक्षक आयुश कुमार जोशीले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज छोराको होटल उद्घाटनको तयारीका लागि गएको बेला आफ्नो घरमा च्यानल गेट तोडेर चोर पसेको पीडित खगराज भट्राइले मायादेवीलाई बताउनुभयो । भट्टराईले बताए अनुसार चोरले घरका तीन वटा दराज तोडफोड गरेर १४ तोला सुन, दुई वटा मोबाइल, एउटा खुकुरी र नगद ६ हजार लगेको छ । रातीको समयमा चोरले निकै चलाखपूर्ण तरिकाले चोरी गरेको उहाँको भनाई छ । चोरले गेटमा लगाएको ताला नतोडी गेट नै तोडेको उहाँले बताउनुभयो ।
ठुलै गिरोहले चोरी गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान कार्यलाई अगाडी बढाउन उहाँले प्रहरीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । चोरीको प्रकृती हेर्दा भारतबाट आएका ब्यक्तीले चोरी गरेको हुनसक्ने उहाँको आशंका छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग मै यसरी चोरी हुनुले सुरक्षा चुनौती थपिएको उहाँको भनाई छ ।
यता आफु प्यूठानमा जागिर गर्ने भएकाले प्यूठान गएको समयमा घरमा चोरी भएको सिर्जना पाण्डेले सुनाउनुभयो । पाण्डेको घरबाट पनि साढे ९ तोला सुन, एउटा ल्यापटप, ४ वटा मोबाइल, एउटा डिजिटल क्यामरा र नगद ३ हजार चोरी भएको छ । यस किसिमको कार्यगर्ने जोकोहीको पनि मलोबल बढ्न नदिनका लागि त्यस्ता ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न उहाले प्रशासन समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
यता सिसिटिभि फुटेजमा राती १२ बजे पछि तीन जना बाइकमा आएर सिर्जना पाण्डेको घरनिर रोकिएको देखिन्छ । तीन जनाको समुहमा आएका उनीहरु पश्चिमबाट पूर्व जादै थिए । बाइक मोडेर पुनः पाण्डेको घरमा रोकिएको फुटेजमा देखिन्छ । पाण्डेको घर अगाडी बाइक रोकेर दुई जना घर भित्रि गएको सिसिटिभी फुटेजमा देख्न सकिन्छ । त्यसपछि उनीहरु केही अगाडी गएर अर्को घर अगाडी रोकिएका छन् । त्यो घरमा पनि चोरी गरी उनीहरु पुर्वतर्फ लागेका छन् ।
सोही सिसिटिभी फुटेजका आधारमा अनुसन्धान अगाडी बढाउन पाण्डेले प्रहरी प्रशासन समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । एकैदिन एउटै गाउँका चार घरमा चोरी भएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । यस अघि पनि सोही ठाउँको सपना आचार्यको घरमा चोरी भएको थियो । घरमा चोर पसेपनि केहि सामान लगेको थिएन । त्यसको केही दिनमै यसरी चोरी भएपछि चोरको ठुलै गिरोह हुन सक्ने र कसैले सुराकी गर्न सक्ने स्थानीयको आशंका छन ।
इलाका प्रहरी कार्यलय पिपराले चोरीको घटनालाई अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । बुधबार दिउँसो प्रहरीले चोरी भएका घरहरुको निरिक्षण गरेको थियो ।